कर्णालीमा कोरोना भाइरस रोक्न नाकाहरुमा कडाइ – Yug Aahwan Daily
Saturday 8th May 2021/
कर्णालीमा कोरोना भाइरस रोक्न नाकाहरुमा कडाइ
युग संवाददाता । २ चैत्र २०७६, आईतवार १३:२५ मा प्रकाशित
सुर्खेत : कोरोना (कोभिड–१९) भाइरसले विश्वलाई नै आतंकित बनाइरहेको बेला कर्णालीमा यसको संक्रमण रोक्न नाकाहरुमा कडाइ गर्न थालिएको छ । प्रदेशभित्र आउने मानिसहरुको नाकाहरुमा स्वास्थ्य परिक्षण सुरु भएको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले बाहिरबाट भित्रने सबै नाकाहरुमा हेल्थडेक्स स्थापना गरेर स्वास्थ्य परिक्षणसँगै चेकजाँचमा कडाइ गर्न थालेको हो । तर हालसम्म नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितहरु भने फेला परेका छैनन् । तराईसँग नजोडिएको कर्णालीमा कोरोनाका संक्रमितहरु भित्रन नदिन र संक्रमितहरु फेला परेमा तत्काल कसरी आइसोलेसन कक्षमा उपचार गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले विशेष रणनीति अपनाएको छ । प्रदेशभित्र भित्रने मुख्य नाका सल्यानको कपुरकोट, सुर्खेतको बबई, कुइने, हुम्लाको हिल्सा र सुर्खेत विमानस्थलमा दैनिक यात्रुहरुको चेकजाँचलाई तीव्रता दिएको छ ।
हिल्सा चीनसँग सीमा जोडिएको नाका हो । चीनबाटै विश्वव्यापी बनेको कोरोना भाइरसका विरामीहरु प्रदेशमा भित्रन नदिन सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ वटै नाकाहरुमा चेकजाँचमा कडाइ गरेको छ । पछिल्लो समय छिमेकी राष्ट्र भारतमा एकपछि अर्कोगर्दै कोरोनाको संक्रमण फैलिदैँ गएपछि कर्णाली भित्रने यात्रुहरुलाई कडाइका साथ चेकजाँचमा गरिरहेको छ । कर्णालीमा सडक निर्माण लगायतका काममा भारतीय नागरिकहरु आउने गरेका छन् ।
उनीहरुसहित अन्य यात्रुहरुमा ज्वरोको अवस्था बुझ्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले रत्न राजमार्गको बबईमा हेल्थडेस्क स्थापना गरेको छ । फागुन २६ गतेदेखि नियमित रुपमा चेकजाँचका लागि हेल्थडेस्क स्थापना गरेको सरकारले अझै प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति थप गर्ने गृहकार्यमा जुटेको छ । बबईमा दुइ ओटा शौचालय बनाउन, चौविसै घण्टा स्वास्थ्य जाँच गर्न कर्मचारी व्यवस्थापन र ब्यारेल निर्माण गर्न मातहतको मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।
‘स्वास्थ्यकर्मीले ज्वरो नापे, ज्वरो रहेन्छ, उहाँहरुले तपाइँ गाडीमा जानुस् भने अनुमित दिए’ दैलेखका कपिल खड्काले भने, ‘हाम्रो प्रदेशमा आउँदा मात्रै मैले जाँच गर्न पाएँ । प्रदेश सरकारले कम्तीमा यति गर्नु पनि ठिकै हो जस्तो लाग्छ ।’ सबैलाई जाँच गर्नु राम्रो भएको बताएका खड्काले कम्तिमा हरेक यात्रुहरुलाई सरकारले मास्क समेत उपलव्ध गराउन सुझाव दिए ।
स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक रिता भण्डारीले मास्कको प्रयोग बढाउनभन्दा पनि कोरोनबाट जोगिने उपाय महत्वपूर्ण भएकाले त्यतातिर ध्यान दिइरहेको बताईन् । ‘मास्क चौविस घण्टामा फेर्नुपर्ने हुँदा सबै जनताको पहुँचमा नभएका कारण सावुन पानीले हात धुन र अन्य बच्ने उपाय अवलम्बन गर्न अनुरोध गरिरहेका छौं’ निर्देशक भण्डारीले भनिन्, ‘हामी सबैको तयारी भनेकै कर्णालीमा कोरोना भित्रिन नदिन केन्द्रित छ ।’
बबईमा स्थापना गरिएकोे हेल्थडेस्कको प्रभावकारिताबारे बुझ्न कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शनिबार स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । प्रदेश राजधानी भित्रने नागरिकहरुलाई हेल्थडेस्कका कर्मचारीहरुले गर्ने व्यवहार, अभाव र त्यसलाई अझै व्यवस्थापन गर्न चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा बुझ्न बबई पुगको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।
‘नेपालमै कोरोना भाइरस नभित्रियोस् भन्ने कामना हाम्रो हो’ शाहीले भने, ‘छिमेकी राष्ट्र भारतमा कोरोनाको संक्रमण बढी रहेकाले कर्णालीमा भित्रन नदिन सरकारको तर्फबाट चाल्नु पर्ने कदमबारेमा बुझ्न बबई आएको हुँ ।’ मोटरसाइकल सवार वा अन्य कुनै सवारी साधनमा आवतजावत गर्ने नागरिकलाई कडा निगरानीमा राखेर चेकजाँच गर्न मुख्यमन्त्री शाहीले कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
भारतका विभिन्न स्थानमा नेपाली युवाहरु रोजगारका लागि जाने गरेको बताउँदै अब ती युवाहरुको फर्कने क्रम सुरु भएकाले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री शाहीको आग्रह थियो । ‘प्रदेशमा भारतबाट नै कोरोना भित्रिने खतरा छ । हजारौं युवाहरु भारतबाट फर्किरहेका छन् । खेतीपातीको सिजन भएका कारण कतिपय आउँदै पनि छन् । भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र भइरहेको बेलामा कुनै पनि बेलामा कोरोना कर्णाली भित्रिन सक्छ, त्यसलाई बबई वारी आउन नदिने गरी खटिनुस् । के आवश्यक पर्छ प्रदेश सरकार सहयोग गर्न तयार छ’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने ।
प्रदेश अस्पतालमा पाँच बेडको आइसोलेसन कक्ष
कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश अस्पताल कालागाउँमा आइसोलेसन बेड र क्वारेन्टाईनको पनि अनुगमन गरेका छन् । अस्पतालका मेसु डा. डम्बर खड्काले अस्पतालमा पाँच वटा आइसोलेसन बेड तयार अवस्थामा राखिएको जानकारी गराए ।
‘हामीले पाँच वटा बेडहरु तयारी अवस्थामा राखेका छौं । क्वारेन्टाईनका लागि पनि बेडको व्यवस्थापन अन्तिम चरणमा पुगेको छ’ डा. खड्काले मुख्यमन्त्री शाहीलाई भने, ‘अरु २० वटा आइसोलेसन बेडको व्यवस्थापन गर्न हामीले तयारी गरिरहेका छौं ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने कम्तिमा दुईसय जनालाई क्वारेन्टाईनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए । ‘कम्तिमा दुईसय जनालाई क्वारेन्टाईंनमा राख्ने गरी तयारी गर्नुस् । आवश्यक परे बेड पनि थप्नुस्’ शाहीले भने, ‘कोरोना आतंकबाट नागरिकलाई जोगाउन जति सकिन्छ उपाय अपनाउनुस् ।’